Dowladda Norway oo aqoonsatay Passport-ka Soomaaliya , laguna aadi doono. – Hornafrik Media Network
Dowladda Norway oo aqoonsatay Passport-ka Soomaaliya , laguna aadi doono.
Hornafrik-Munaasabad manta ka dhacday Safaarada dalka Norway ee Nairobi kenya ayaa dowladaha Soomaaliya iyo Nowrway waxay ku kala saxiixdeen heshiis ku aadan aqoonsiga Passporka soomaaliga.
Dowladda Soomaaliya waxaa munaasabadda lagu aqoonsaday Passporka uga qeyb galay Wasiirka Arrimaha Dibadda Axmed Ciise Cawad wasiirka Amniga Maxamed Abukar Ducaale Islow iyo Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi.
Agaasimaha Hey’adaa Socdaalka Iyo Jinsiyadda Soomaaliya Maxamed Aaadan Kofi ayaa sheegay in safiirka Norway u fadhiya Kenya danjire Victor C. Rønneberg hal sano oo ay wada-shaqeynayeen dowladda Somaaliya kaddib ay ku qanceen hannaanka lagu bixiyo baasaboorka iyo tayadiisa.
Dad kabadan 50 ruux oo ku sumoobay G.Galgaduud.